Adiga ayaa ku kalifaya in ay xaaskaada ay sidaan sameyso qormo xaqiiqda taabatay - iftineducation.com
iftineducation.com – Waxaa caado u noqotay dumarkii soomaaliyeed badan kooda inay meherad ka dhigteen sidii ay u badali lahaayeen midabka jidhkooda, soomaalida oo kamida dadka midabka furan ee daga qaarada Afrika ayaa isoogu jira kuwo midab madow, kuwo midab maariin ah leh iyo kuwo u midab kooda lagu tiriyo inuu yahay cadaan. Gabadha midabka cad ee soomaaliyeed waxay isu haysataa inay ka qurux badan tahay mida kale, arintaasina maaha waxa ay iyadu kaligeed iska dhaadhicisay. Tusaale gabadha la rabo in la tilmaamo quruxdeeda waxaa loogu yeedhaa cadayeey. Taasoo looga jeedo qurux badaneey, cadaan jacayl heerka ay ka gaadheen dadka qaar waxay gaadheen in magaalooyinka qaar loogu yeedho magaalo cadeey, sida xamar cadeey iwm. Magaalo maxay ka taqaanaa cadaan.